XFCE မှသတင်း !! Xfce 4.12 မှာဘာအသစ်တွေလဲ။ | Linux မှ
ကျွန်ုပ်တို့သည်သတင်းအချို့ကိုကြည့်ရှုပြီးဖြစ်သည် XFCE ၄.၁၄ အချို့ဆောင်းပါးများမှတဆင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်သတင်း ၃ ပုဒ်ဖြင့်သတင်းကိုချဲ့ထွင်သည် သူ့ဘလော့တွင် Skunnyk နောက်ဆုံးပေါ်သတင်းများနှင့်အတူ Git repositories ကို။
Xfce 4.12 မှာဘာအသစ်တွေလဲ။
Xfce 4.12 ကိုဖြန့်ချိရန်လွန်ခဲ့သောအပတ်အနည်းငယ်ကဖျက်သိမ်းရန် "အရေးကြီးသောအမှားများ" စာရင်းကိုဆုံးဖြတ်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ သင်ရှာလိုရသည် ဒီမှာစာရင်း။ Xfce 4.12 သည်လူများစွာအတွက်နောင်တရရန်ပိုမိုကောင်းမွန်သောပေါင်းစည်းမှုအတွက်အချို့ gtk2 အထောက်အပံ့ဖြင့် gtk3 ကိုဆက်လက်အသုံးပြုလိမ့်မည် နောက် version အတွက် gtk3 သို့ port လုပ်ရန်တိုက်တွန်းခြင်းခံရနိုင်သည် Ikey doherty (ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါသည်၊ EvolveOS မှအလားတူ) လိုချင်သည် လက်ကိုတင်လော့ အဲဒီထဲမှာ
ချဲ့ခြင်း (ကျွန်ုပ်တို့ဖန်သားပြင်ကိုထုတ်လွှင့်လိုသောအခါအလွန်အေးသောအရာ) ။ ဗီဒီယိုကြည့်ပါ
အသစ်နှင့်စိတ်ကြိုက်ပြုပြင်မွမ်းမံထားသော tabwin (alt + tab) ကို ၀ င်းဒိုးကြိုတင်ကြည့်ရန်။ (Composer ဖြင့်သာ activated နှင့်အတူ) ။
CSD အထောက်အပံ့ (Composer ဖြင့်သာအသုံးပြုနိုင်သည်) ။
2-monitor တိုးချဲ့ထားသော desktop mode ကိုထောက်ပံ့မှုဖြင့် display settings သည်များစွာတိုးတက်ခဲ့သည်။
Touchpad အထောက်အပံ့ကိုထည့်သွင်းထားသည် libinput ပါ.
အရောင်များကိုပန်းချီကားများထဲမှ themes များထဲသို့ထည့်သွင်းပြီး icon themes များအတွက် preview dialog ကိုပြုလုပ်သည်။
Desktop Wallpapers အထောက်အပံ့
ပြောင်းလဲမှုကိုအတင်းအကျပ်လုပ်ရန် –next option ကိုထည့်သွင်းထားသည် နောက်ခံပုံများ.
“ Move to Trash” option ကိုထည့်သွင်းထားသည်
ခလုတ်များ / မီနူးများ၏ပိုမိုကောင်းမွန်သောအပြုအမူ။
အခုဆိုရင် panel ကိုအသိဥာဏ်ရှိစွာဖုံးကွယ်ထားနိုင်ပြီး၎င်းကို dock တစ်ခုအဖြစ်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ဗီဒီယိုကြည့်ပါ.
Xfce4နှင့်သဟဇာတဖြစ်သော xfce4.10-power-manager အသစ်။
ပိုကောင်းတဲ့ထောက်ခံမှု systemd y အပေါ်ယံ
Brightness plug-in ကို battery indikator plugin နှင့်ပေါင်းစည်းလိုက်သောကြောင့် Power Manager plugin အသစ်ပေါ်လာသည်။
၏ရှာဖွေရေး logind လုပ်ပါ စီမံခန့်ခွဲမှုပိုကောင်းဆိုင်းငံ့ / hibernate သည်
upower 0.99 အတွက်ထောက်ပံ့သည်
အစက်အပြောက်ရှိ thumbnail ကိုစစ်ဆေးပါ။
မူဝါဒထည့်ပါ pkexec။ အသုံးပြုသူသည် Thunar ကို အသုံးပြု၍ ဖိုင်များအား root အဖြစ်ပြုပြင်လိုပါကမှန်ကန်သောအထောက်အထားများရှိပါကဤနည်းဖြင့်သူလုပ်ဆောင်နိုင်သည်။
Gtk3 ရှိ bookmarks များကိုထောက်ပံ့သည်။
သစ်ကိုမြင်ကွင်း mode နှင့်အခြားဂရပ်ဖစ်တိုးတက်မှုအသစ်နှင့်အတူ interface ကို, clean up ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့်ယခုအဘို့အ .. အဘယ်သို့ထင်ကြသနည်း
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » applications များ » XFCE မှသတင်း !! Xfce 4.12 မှာဘာအသစ်တွေလဲ။
ဒါကအရမ်းအေးပြီး XFCE ကိုနောက်တစ်ခါသုံးရင်ပေါ့။ 🙂
XFCE အတွက်ကောင်းတယ် unix ကဲ့သို့သောအရာအားလုံးလိုအပ်နေဆဲဖြစ်သောကြောင့်ရှင်းလင်းပြတ်သားမှုရှိမရှိကြည့်ကြပါစို့။
အလွန်ကောင်းစွာသူတို့ကြိုးစားခဲ့ကြပြီ။ ကျွန်တော်ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့အင်္ဂါရပ်အချို့နဲ့ Xfce ကိုသုံးရန်တိုက်တွန်းပါသည်။ ငါကအနည်းငယ်သုံးတယ် (KDE ကိုသုံးတယ်) ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါကအရာတစ်ခုခုပျောက်နေတယ်လို့ခံစားရတယ်။ အလွန်ဆိုးသည်မှာတည်ငြိမ်သော Slackware ကိုရရန်အချိန်အနည်းငယ်ကြာလိမ့်မည်…🙂
အသက်ရှင်လျက်သေသော XFCE ကိုသတ်!
ကျနော်တို့ဒါကိုစမ်းသပ်တော့မယ်၊ အတည်ပြုတော့မယ်။ ဒီ desktop ကိုကျွန်တော်ကြိုက်လို့သူတို့မျှော်လင့်ထားတာကိုတိုးတက်အောင်လုပ်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်၊ ဒါပေမယ့်သူတို့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ငါ့ကိုဘယ်လိုမှမအောင်မြင်ခဲ့ဘူး၊ ဒါကြောင့် Mate ကိုငါအဆုံးသတ်လိုက်တာပဲ။ ဒီပြproblemsနာတွေကိုသူတို့ဖြေရှင်းနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်တယ်။
Xfce ကိုငါနှစ်သက်တယ်။ FreeBSD စနစ်တွင်တပ်ဆင်ထားသည့်လက်ရှိ desktop သည် Xfce (အားလုံးပြင်ဆင်နိုင်သည်) ဖြစ်သည်။ "audio, network" အမှတ်အသားကိုစံနမူနာထား ထား၍ systemf ကို xfce တွင်ပြန်လည်ရယူလိုပါသလား။
SYRO ပါ ဟုသူကပြောသည်
သင် Xubuntu 14.04 ကိုမည်သို့ install / upgrade လုပ်မည်နည်း။
သို့မဟုတ် Ubuntu စတူဒီယို 14.04 တွင်?
ဘယ် latency အနိမ့် kernel ကိုမှလွဲ။ အခြေခံအားဖြင့်အတူတူပင်ဖြစ်လိမ့်မည်။
ကောင်းသောအပြောင်းအလဲများကိုမြင်ကြသည်။ ငါပါးနပ်စွာဝှက်ထားသော dashboards နှင့် task manager အသစ်ကိုတကယ်သဘောကျသည်။ ဖမ်းယူမှုများပေးပို့မည့်ဝန်ဆောင်မှုကိုရွေးရန်ဖြစ်နိုင်သည်။ သို့သော်၎င်းတို့သည်သင်စိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ပြောင်းလဲလိုပါကထပ်မံထည့်သွင်းခြင်းကကောင်းသည်။
အချို့သောချို့ယွင်းချက်များကိုသိပ်နားမလည်နိုင်၊ အရောင်များကို themes များထဲသို့ထည့်ထားသည်။ သို့သော် GTK2 တွင် Mate နှင့် LXDE လုပ်နိုင်သောအရောင်အသစ်များကိုမရွေးနိုင်ကြောင်းကျွန်ုပ်နားလည်ပါသည်။ ထို့အပြင် task manager အသစ်သည်သုံးစွဲထားသော RAM တန်ဖိုးကိုမပေးရသေးကြောင်း၊ စိတ်မကောင်းစရာဝေဝါးသည့်ရာခိုင်နှုန်းသာကျန်ရှိနေသည်ကိုကျွန်ုပ်တွေ့မြင်ရသည် (Xfce မည်မျှ RAM တွက်ချက်သည်၊ အစစ်အမှန်၊ rounded တစ်ခုဖြစ်သနည်း), Lxtask ကပြုလုပ်သည်။
ဒါပေမယ့်ဟေး, အဆင်ပြေ, Xfce ယခုငါ့ desktop ဖြစ်ပါတယ်။
ငါ့ကိစ္စမှာတော့, ကျွန်ုပ်၏ desktop ကို XFCE ရရန်အကူအညီတောင်းသည် မဆွဲပါနဲ့
အရောင်များကို xfce သို့ပြောင်းရန်သင်ဤအထုပ်ကို install လုပ်ရန်ကြိုးစားခဲ့သလား။
ကျွန်ုပ်သည် netbook ရှိသည့်ကတည်းက xfce ကိုနှစ်ပေါင်းများစွာမသုံးခဲ့ပါ၊ သို့သော်ငါ ZimageZ thumbnails ကိုမုန်းသောကြောင့် imgur သည်အလွန်ကောင်းမွန်သည်။
adolfo rojas ဟုသူကပြောသည်
Expose, God by Expose ... expose, hot corners နှင့် windowck အကြောင်းမေ့လျော့ခဲ့သည်။
adolfo rojas သို့ပြန်သွားရန်
XFCE ၄.၁၂ ဖေဖော်ဝါရီလနောက်ဆုံးအပတ်ထွက်ခွာမည်။
Skunnyk ၏ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်တွင်ဖြစ်သည်။ http://blog.alteroot.org/articles/2015-02-19/new-from-xfce-part-3.html
ကျွန်ုပ်သည် Manjaro ရှိ AUR မှ Xfce 4.11 (တည်ငြိမ်မှု 4.12 စစ်ဆေးခြင်း) ကို ၆ လကျော်အသုံးပြုခဲ့ပြီးအမှန်တရားကတော့ကျွန်ုပ်သည်အခြားအတွက် Xfce ကိုမပြောင်းလဲပါ၊ ဗေဒကိုမချိုးသော GTK6 နှင့် GTK2 themes များကိုရှာရန်မှာတစ်ခုတည်းသောမကောင်းသောအချက်မှာ desktop မှ (GTK3 application များအတွက်)
အလွန်ကောင်းသောသတင်းအချက်အလက်, ဘယ်မှာ Xfce ဗားရှင်းအသစ်ဖြန့်ချိလိမ့်မည်နည်း
စန်တီယာဂို Murchio ဟုသူကပြောသည်
သူတို့ဟာကျောက်တုံးကြီးတွေလို့ပြောကြတဲ့အတွက်အရမ်းကောင်းတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ပါ။ ငါအတော်လေးအချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိအသုံးပြုခဲ့သည်, ဒါကြောင့်ငါ့ကိုအပေါ်ဆွဲထားဘယ်တော့မှအလွန်ကောင်းသောတုံ့ပြန်မှုကြိမ်။
Santiago Murchio အားပြန်ပြောပါ
ယခု၎င်းကို Manjaro ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဗားရှင်းတွင်ရနိုင်သည်။ ဤနေရာတွင်ကူးယူနိုင်သည်။
အခုငါ KDE နဲ့အတူရှိနေတယ်၊ ​​ပြီးတော့ငါရဲ့ graphical environment ကိုပြောင်းဖို့အရမ်းခက်တယ်။ ဒါပေမယ့်သူတို့ဝမ်းသာအားရနေတဲ့အမှန်တရားကသူကိုဆက်ပြီးထောက်ပံ့နေတာပဲ
သမိုင်းမတင်မီက PC ရှိသူများအတွက်ဤစားပွဲသည်ဇိမ်ခံပစ္စည်းအဖြစ်သို့ရောက်ရှိသွားသည်။ အများစုမှာရိုးရှင်း။ အကျိုးရှိသည်၊ ကြမ်းတမ်းပြီးယင်း၏တာ ၀ န်ကိုကျေပွန်စွာထမ်းဆောင်သည်။ သို့မှသာဗားရှင်းအသစ်မီးဖိုထဲမှထွက်လာသောအခါသင်ကိုယ်တိုင်သည်သတင်းများဖြင့်သင်ကိုယ်တိုင်ပို့ဆောင်ပေးသောအလုပ်ဖြစ်သည်။ တူညီသော« vox populi » (:
... ထိုအချက်အလက်များအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည် (:
xfce ကို xubuntu မှာထည့်လိုက်ရင် ၁၅.၀၄ ငါစမ်းမယ်။ နောက် Debian test ကတည်ငြိမ်နေလိမ့်မယ်မထင်ဘူး၊ ဆိုလိုတာက၊ သြဂုတ်လအတွက်တွက်ချက်လိုက်ရင်၊ Aprilပြီလမှာ Xubuntu မှာမထည့်ရင်၊ ငါဒါကို Debian နဲ့စမ်းကြည့်မယ်။ ။
ဗားရှင်း ၄.၁၂ အားတည်ငြိမ်မှုအဖြစ်ထုတ်ပြန်ပြီးဖြစ်သည်။
ငါနှစ်ပေါင်းများစွာကအသုံးပြုခဲ့သည်။ ငါ့ကုတင်စားပွဲပဲ အလွ !!! ငါလက်ပေါ်မှာရဖို့မစောင့်နိုင်ပါ။
Desktop မှ "move to the trash" option တွင်ထည့်သွင်းမှုမရှိသေးပါ၊ task manager သည်အနည်းငယ်တိုးတက်လာသည် (လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တစ် ဦး ကသူ၏ဖော်ပြချက်အရ RAM စားသုံးမှုကိုမပေးသေးသော်လည်း) နှင့်အနည်းငယ်သောအရာများနှင့်တိုးတက်မှုများကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ သူတို့ကပိုပြီးစိတ်ဝင်စားဖို့လုပ်တာထက် ... သူတို့ဘယ်လောက်အထိထိရောက်တယ်ဆိုတာကိုကြည့်ရတာစိတ်မရှည်ဘူး။
အခြားတစ်ဖက်တွင်၊ XFCE 4.12 ကိုစောင့်ဆိုင်းစရာမလိုဘဲအောက်ပါ panel ကို Dock တစ်ခုအဖြစ်အသုံးပြုရန်ကျွန်ုပ်၏ပထမ ဦး ဆုံး XFCE (Xubuntu 13.10) တွင်ဤနည်းလမ်းကိုငါအသုံးပြုခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ …မည်သို့ပင်ဖြစ်စေငါ Cairo-Dock ကိုကျွန်ုပ်ဆက်လက်ထားရှိသည်။ ၎င်းသည်အလွန်ဆွဲဆောင်မှုရှိပြီးအလွန်ပြုပြင်ပြောင်းလဲနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်၎င်းကိုထုတ်ယူလိုက်သည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်၏ desktop နှင့်ငါ့ panel ကိုဖြစ်နိုင်သမျှသန့်ရှင်းစွာထားနိုင်သည့် conky နှင့်ကောင်းစွာပေါင်းစပ်သွားသည်။ မည်သည့်ကိစ္စတွင်မဆို panel ကိုအတုပြုလုပ်နိုင်သည်ဆိုလျှင်အမှန်တရားမှာ၎င်းသည်ကောင်းသည်။ အနည်းငယ်အရင်းအမြစ်များကိုအတူအသင်းများသည်။
ငါမကြာသေးမီက OpenSUSE ၌ဤ desktop ဖြင့်စတင်ခဲ့သည်၊ ၎င်းသည်အလွန်ပေါ့ပါးပြီးအလွန်အေးသည်
အဆိုပါ Rengo ဟုသူကပြောသည်
ကောင်းတယ် သို့သော်ယင်းကို ၂ နှစ်ကျော်ကြေငြာခဲ့သည် ... ခန့်မှန်းခြေထုတ်ဝေသည့်နေ့ရက်ရှိပါသလား။
အယ်လ် Rengo မှစာပြန်ရန်
kde လိုမျိုး menu applications တွေပျောက်နေတယ်။ အခုငါနှစ်ခုကြည့်ပြီ